Sawirrada muuqaalka iyo fiidiyeyaasha dhulgariirkii iyo tsunami ee Japan - Geofumadas
Maarso, 2011 Cartografia, Video
Taasi waa wax aad u wanaagsan. Inkastoo galbeedka Yurub aan ku soo barbaaray Maraykanka iyo Maraykanka waxaan heysanay intii ugu fiicneyd hurdada, dhulgariir dhul ah oo ku dhow 9 Richter degrees ayaa ku dhuftey Japan markii ay joogeen 3 galabtii.
Fiiri fiidiyowyada sida biyaha u galo oo u jiido guryaha, gawaarida iyo doomuhu waa mid gaar ah. Waxaa la sheegay in ay tahay midka ugu xoogan ee 140 ee taariikhda Japan, iyo shanaad ee dunida oo dhan. Waxaan xusuusneynaa kuwa dhowaan ka yimid Chile iyo Haiti, laakiin dhacdadan midkani waa mid aad u kala duwan.
Way ku adagtahay in la ogaado in dhimashada dhimashada ay aad u hooseeyso, inkastoo ay hubaal tahay inay korto maaddaama meelaha meelaha burburay ay si weyn u cabbiraan; Dhamaan dadka xeebaha oo dhammeystiran ayaa laga yaabaa in la waayay. Waa wax aad u liidata in dukaamada, shaqaaluhu halkii ay u socon lahaayeen in ay hoy ka dhigaan hoostooda, waxay ilaaliyaan daaqadaha dukaanka si ay wax soo saaraan dadaalkooda aysan ku dhicin dhulka. Dhaqan la yaab leh oo ku saabsan nabadgelyada kaabayaasha iyo waxbarashada wax ka qabashada xaaladahaas.
Weli waa la arki doonaa waxa ka dhacaya Pacific of America, kaas oo loo soo sheegay, maadaama saameynta xeebaha ay arki doonaan dhowr saacadood ka dib. Waxaa hore loo ogaaday in saameynta ay gaartay Hawaii, inkasta oo aanay u muuqan mid ficil ah sida suxufiyiinta iyo siyaasiyiinta ayaa sameeya. Inkasta oo ay yihiin waqtiyo murugo bini aadanimo, waan ka qosli jiray markii ay laba suxufi isku dayeen inay sharaxaan waqtiga wakhtiga uu gaadhay xeebta Peru, isku dayaya in la xisaabiyo tirada saacadaha la saadaaliyay, xawaaraha lagu qiyaasay mawjadaha iyo farqiga u dhaxeeya tan iyo markii ay mugdigu ka soo horjeedo aagga wakhtiga.
Khariidadan ayaa ka tarjumeysa saacadaha qiyaasta ee saameynta qaddarka haraadiga ah ee tsunami ee soo gaari doona Maraykanka. Fiiri in marka laga hadlayo Chile, ay timaado waaberiga, lakiin horeba Sabtida. Inkastoo Central America u dhexeeya 8 iyo 12 habeenkii.
Post Previous«Previous Waqtiga xaadirka ah, qiiqa sanadka 10,000
Post Next Maxaa Cusub ee AutoCAD 2012 | Siyaasadda Khaaska ahNext »